विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस -२०२१, आत्महत्या ठूलो चुनौती बन्दै - सुनाखरी न्युज
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस -२०२१, आत्महत्या ठूलो चुनौती बन्दै
Posted on: September 10, 2021 - 1:59 pm
गोपाल ढकाल (मनोविद्) – विश्वव्यापी रुपमा जटिल समस्या बन्दै गएको आत्महत्याको रोकथाम तथा यसका बारेमा जनचेतना फैलाउने उदेश्यले प्रत्येक बर्ष १० सेम्टेम्बरका दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदै आईएको छ । यस वर्ष ” Creating Hope through Action ” अर्थात ” कार्यको माध्यमबाट आशा जगाउ ” भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाईदै छ।
आत्महत्या कोरोनाको महामारीले गर्दा मात्र भयावह भएको हो पहिले यस्तो थिएन भन्ने बुझाई सरासर गलत हो । कोरोनाको संकट पछि आत्महत्याको जोखिम भने बढेर गएकोछ । प्रकृतिक बिपत्ति तथा अन्य असहज र जोखिम पुर्ण अबस्थामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्याको दर बढेर जाने जोखिम हुन्छ ।
नेपालमा आत्महत्या जनस्वास्थ्यको एउटा ठुलो समस्या र चुनौतिका रूपमा देखा पर्दै आएकोछ । तथ्यांकले देखाए अनुसार नेपालमा आत्महत्या गर्नेको दर प्रत्येक वर्ष ८ -१० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७५ – २०७६ मा ५,७५४ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका थिए। जुन सरदर दैनिक १६ जना पर्न आउछ ।
आ.व.२०७६- २०७७ मा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ६२७९ रहेको थियो । जसमा दैनिक १७ जनाले आत्महत्याबाट आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेको देखिन्छ । यस आ.व २०७७/०७८ मा ७ हजार १४१ जना मानिसहरुले विभिन्न कारणले आत्महत्या गरी ज्यान गुमाएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ जुन दैनिक औसत १९ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ । यो संख्या आ.व ०७६/०७७ भन्दा १४ प्रतिशतले धरै हो ।
आत्महत्याको हिसाबले केही ब्यक्तिहरु उच्च जोखिममा रहेका हुन सक्छन । जस्तो डिप्रेसनमा भएका , कुनै दुखद घटनाले धेरै नै प्रभावित भएका , पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेका, तनाब पूर्ण पेशा वा ब्यबसायमा लागेका , पारिबारिक झै – झगडा वा उल्झनमा फसेका, आर्थिक संकटमा परेका , बिरोजगार तथा लाँगू प्रदार्थको कुलतमा फसेकाहरु आत्महत्याको हिसाबले जोखिममा परेका ब्यक्तिहरु मानिन्छन् ।
आत्महत्याको प्रयास वास्तवमा सहयोगका लागि एक प्रकारको चित्कार हो । कुनै कुनै अवस्थामा बाहेक व्यक्तिले एकै पटक आत्महत्या गर्दैन । आत्महत्या गर्नु अगाडि ब्यक्तिले विभिन्न किसिमका लक्षण वा संकेतहरू देखाउने गर्दछ । असी प्रतिशात ब्यक्तिले आत्महत्या गर्नु अगाडि कुनै न कुनै लक्षण देखाउने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उसले घरपरिवार, साथीसङ्गी वा विशेषज्ञको सहयोग पाएमा आत्महत्यालाई धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
आत्महत्या एकदमै संवेदनसिल बिषय हो । आत्महत्याको समचारलाई अतिरन्जित र सनसनी पुर्ण बनाउनु हुदैन । जसले समाजमा झनै नकारात्मक असर पुर्‍याउछ। डिप्रेसनमा गएका र आत्महत्याको सोच बनाएकाहरुलाई यसले आत्महत्या गर्ने हौसला बढाउछ । बालबालिकाहरुले पनि त्यसको नक्कल गर्न सक्छन् । आत्महत्याको खतराको सूचक, जोखिम र सुरक्षाका तत्त्व, स्वहेरचाह आदिको जानकारी भएमा धेरैको जीवन बचाउन सकिन्छ । यसका लागि सबैको सहकार्यको जरुरत पर्दछ ।
कर्मचारी आन्दाेलनका धमिराहरू
डा. पाइलट बन्छु भन्ने बाल मस्तिष्कमा ‘ म ‘ नेता बन्छु भन्ने सोच को बिजारोपण गर्नुछ……